Home » Lahatsoratra mampiavaka » eTN Hero: Cordelia Igel, mpitarika ekipa ao amin'ny Vox Restaurant, Grand Hyatt Hotel Berlin
Betsaka amintsika no mitety ny tany amin'ny asa aman-draharaha no manana tantara momba ny dia. Mandany alina maherin'ny 100 feno karama isan-taona aho ao amin'ny Hyatt Hotels manerantany. Raha manao an'izany ianao dia hahafantatra marika akaiky kokoa.
Manangona ny lisitr'ireo maherifoko manokana aho ary manome voninahitra ny tsirairay amin'izy ireo Heroes eTN. Tsy afaka mividy eTN Heroes ianao, ary ity lohateny ity dia tolo-kevitry ny mpanonta mifototra amin'ny zavatra niainanao manokana.
Tsapako fa be dia be ny maherifo amin'ny indostrian'ny fandraisam-bahiny ary mbola bebe kokoa aza ao amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany, noho izany ny zavatra niainako manokana dia marika kely fotsiny amin'ny fanekena mendrika.
Androany, tiako ny hampahafantatra an'i Cordelia Igel, mpitarika ekipa zokiolona ao amin'ny Vox Restaurant ao amin'ny the Grand Hyatt, Berlin, Alemana ho maherifo farany eTN.
Ny mpitsangatsangana toa ahy dia miaina trano fandraisam-bahiny amin'ny trano faharoa. Rehefa misy tsy misy dikany dia miteny foana aho ary manantena ny handrenesana ny fitsikerana ahy. Tiako ho salama tsara ireo orinasa miompana amin'ny diako.
Ny fitiavako ny espresso isan'andro dia fitiavan'ny mpiara-dia namana maro anjara. Ho ahy dia tsy mitombina izany raha tsy hitan'ny hotely iraisam-pirenena fa ny espresso tsara no teboka fivarotana lehibe. Ho ahy dia teboka mividy lehibe izany rehefa mifidy hotely.
Ohatra, nijanona tsy nijanona tao amin'ny Seranam-piaramanidina Marriott Newark izay ny Starbucks amin'ny hotely ity dia misokatra amin'ny 6 maraina ka hatramin'ny 10 maraina.
Manelingelina ahy ny saiko satria tonga 24 ora isan'andro ny olona satria hotely seranam-piaramanidina rahateo.
Miaraka amin'ireo mpandeha tonga na miala amin'ity trano fandraisam-bahiny ity dia tsy mandeha foana amin'ny fotoana Atsinanana Atsinanana.
Ny kaopy kafe tsara dia lasa zava-dehibe toy ny fandriana tsara na fandroana mafana.
Toy izany koa ny sakafo. Misafidy hotely ahazoako misakafo maraina, atoandro, na sakafo hariva aho 24/7 satria ny famataran'n'ny vatako dia tsy mifanaraka matetika amin'ny fotoana aleha.
Fahadisoana no miseho, indrindra rehefa voadio ianao. Ny iray tamin'ireo ratsy indrindra dia rehefa naka valizy izay an'ny mpandeha iray hafa tany Tokyo aho rehefa tonga avy tany Abu Dhabi ary tonga tao amin'ny Grand Hyatt Tokyo nitondra valizy diso. Takashi Kai, mpitantana mpanampy tao amin'ny Grand Hyatt Tokyo, no maherifon'ny eTN voalohany tamin'io andro io ary nitantana an'io toe-javatra tsy afaka sy mahasosotra ahy io.
Eto aho no misaotra betsaka an'i Cordelia Igel, mpitarika ny ekipa zokiny indrindra ao amin'ny Vox Restaurant ao amin'ny Grand Hyatt Berlin, ilay mahery fo eTN farany teo.
Tamin'ny volana martsa nandritra ny ITB dia nijanona tao amin'ny hotely aho nandritra ny 8 alina.
Ny hotely dia manana sakafo maraina mahafinaritra sy faritry ny piscine / gym miaraka amin'ny toerana tena afovoany sy mahaliana akaikin'i Potsdamer Platz.
Kely kely sy antonony ny efitrano ao Berlin, fa azo ekena. Mety norobaina aho. Nijanona tao amin'ny Hyatt Haus Duesseldorf alohan'ny hahatongavany any Berlin mandritra ny dia ihany ary alina ihany koa ao amin'ny Park Hyatt Hamburg ary tiako ny efitrano fandraisam-bahiniko sy hotely. Ny trano fonenako tao Duesseldorf Hyatt Haus dia teo ambonin'ny tampony - fanasan-damba, fanamainana, efitrano fandraisam-bahiny, efitrano fandraisam-bahiny, ary tokotany ivelany misy fijery an-tapitrisany dolara, ary toerana malalaka hampiala-voly olona 100.
Ity no antony maha Cordelia ahy ao amin'ny Grand Hyatt Berlin no maherifoko. Ny fanatrehana fampisehoana varotra be atao dia sarotra hatrany rehefa mitantana fandaharam-potoana sy torimaso be atao. Ny espresso maraina-ko no zava-dehibe indrindra. Taloha, rehefa nijanona tao amin'ny Grand Hyatt Hotel any Berlin aho, dia nankany amin'ny Starbucks ampitan'ny arabe ny hotely, fa tamin'ity taona ity, tsy teo intsony i Starbucks.
Inona avy ireo safidiko? Amin'ny maha-mpikambana Globalista ahy ao amin'ny fandaharam-pahatokisana Hyatt, dia tafiditra ao foana ny sakafo maraina. Hyatt Germany dia tsy iray amin'ireo hotely manery ny Globalista handray ny sakafo maraina ao amin'ny efitrano malalaky ny Club ihany.
Ny sakafo maraina any amin'ny Hyatt Grand Clun matetika dia tsy azo ampitahaina amin'ny sakafo isan-karazany hita ao amin'ny trano fisakafoanana VOX.
Dia lavorary daholo ny maraina, marina? Wrong!
Rehefa manandrana ny espresso ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny Club dia tokony ho fantatro fa tsy mifanaraka amin'ny fenitra arahiko izany satria notaterina tamin'ny milina fanindriana. Na izany aza, tsy ny Grand Clubs rehetra no mitovy. Ao amin'ny Grand Hyatt Seoul, Korea ny milina Espresso no hitako tsara indrindra tamin'ny rafitra Hyatt hatreto.
Ao amin'ny Grand Hyatt Berlin, rehefa misakafo ao amin'ny trano fisakafoanana kintana 5 ao amin'ny hotely, dia espresso kintana 3 no alefa avy amin'ny milina fanindriana.
Rehefa nanontaniako ny mpizara lozisialy, Cordelia, ny antony anateran'izy ireo sakafo maraina faran'izay tsara ary espresso vita amin'ny masinina fanerena ihany no natolony vahaolana.
Ny hany masinina espresso tsara ao amin'ny hotely tsy mampiasa bokotra fanindriana dia tao amin'ny hotely fisotroana. Nandeha tany amin'ny hotely i Cordelia ary nanamboatra kaopy espresso tena ho ahy. Vitany ihany koa ny namerina izany tao anatin'ny iray minitra taorian'ny nandrotsahany. Mahagaga!
Isaky ny maraina taorian'io dia fantatr'i Ramatoa Igel izay tokony hatao. Ary ho an'io fifandraisana fanampiny amin'ny serivisy io ary tsy hisalasala segondra faharoa handroso ambony sy mihoatra, Vielen Dank Frau Igel, ianao no mahery fo eTN androany.